သင်္ဘော USS Nimitz & သင်္ဘော USS ချို V2 DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
downloads ရယူရန္ 199 337
Author: ဗီယာဖာနန်ဒက်ဇ Sylvain Parouty, Rikoooo ခြင်းဖြင့်လိုက်လျောညီထွေ
29 / 08 / 2017 အပေါ် Updated: အတူအခုတော့ 100% သဟဇာတ Prepar3D v1, v2, v3 နှင့် v4 + FSX, FSXEdition ကို -Steam ။ တိုးတက်အော်တို installer ကို, AICarriers2၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုအထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အပေါငျးတို့သ Simulator ကိုသုံးပြီး (.NET) သဟဇာတ။
6 / 17 / 2014 အပေါ် Updated: တိုးတက်လာသောအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူလိုက်ဖက်မှု Prepar3D v1 နှင့် v2 +
ဤတွင်အမေရိကန်ရေတပ်အနေဖြင့်သင်္ဘော USS Nimitz & သင်္ဘော USS ချိုစစ်သင်္ဘောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် add-on တစ်ခု AI အ (Artificial Intelligence) လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာကထိန်းချုပ်ထားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်အရည်အသွေးမြင့် add-on ကိုသငျသညျအပြည့်အဝ 3D အတွင်းပိုင်း / အတော်ကြာ configurations တွေနဲ့အပြင်ပန်းထဲမှာလုပ်ပါတယ်နှစ်ခုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် takeoffs များအတွက်ရဟတ်ယာဥ်ကွင်းနှင့်လောက်လွှဲ မှနေ. လွှတ်ရရှိနိုင်ပါ။
ဒီနည်းကို VERSION ပြောင်းလဲမှုများ:
Nimitz နှင့်ချိုဘို့ -New "ဆဲ Replenishment" configurations ။ helos နှင့်အတူ VERTREP စစ်ဆင်ရေးများအတွက်စံပြ။
သင်္ဘော oiler USNS Patuxent သည် T-AO 201 ၏ -New မော်ဒယ်။ landable helipad နှင့်ညဉ့်လျှပ်စီး Features ။ ဒါဟာသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပင်လယ်ကူးနိုင်သည့် AI အသင်္ဘောကို (AIcarriers များအတွက်အပိုဆောင်း configuration ကိုလည်းပေးထားသညျ) အဖြစ်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်:
အားလုံးလောက်လွှဲ မှနေ. အပေါ် -Added ရေနွေးငွေ့သက်ရောက်မှုများ (လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသင်္ဘောနှင့်အတူပိုကောင်းကြည့်ရှု)
လောက်လွှဲ မှနေ. ပစ်လွှတ်နှင့်ဂျက်လေယာဉ်ပေါက်ကွဲမှု deflectors ဘို့ -Added သံကို
#3 ဓာတ်လှေကားကနေလေယာဉ်ရုံကုန်းပတ်ဝင်သည့်အခါကစားသမားရဲ့လေယာဉ်ရေပေါ်မှာပြပ်စေသောပြဿနာ -Fixed ။
"ဆိပ်ကမ်းခရီးစဉ်" configurations အတွက်အချို့လေယာဉ်များသည်အ -Fixed ညဉျ့အခါလျှပ်စစ်ပြက်ကိစ္စများ
အ AFT ရေဒါမျှော်စင်နှင့်ကျွန်းများတွင်အချို့သောတိ -Corrected ။
-Added ကာတွန်းလောက်လွှဲ မှနေ. "သေနတ်သမား"
ကြောင် #3 နှင့် #4 ဘို့သင်္ဘောသားလောက်လွှဲ မှနေ. -Additional ။
လောက်လွှဲ မှနေ. Shuttle ဘို့ -New texture ။
နယူးအော်တို installer ကို, AICarriers2၏ installation နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ Windows ကိုအားလုံးဗားရှင်းနှင့်အတူယခုသဟဇာတ။
လိုက်ဖက်တဲ့ FSX SP2, FSX အရှိန်, FSX ရေနွေးငွေ့ Edition ကိုနှင့် Prepar3D v1 v2, v3, v4
သင်တို့သည်ဤနှစ်ခုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ပါလိမ့်မည်, ငါအဘို့အ T-45 Goshawk နှင့် F-14 Tomcat သုံးစွဲဖို့သငျသညျအကြံပေး FSX Dino Cattaneo ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မြင် http://indiafoxtecho.blogspot.com/
option ကိုထည့်သွင်း: AIcarriers2 သင်ကပေါ်ဆင်းသက်နိုင်အောင်သင်များ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦး predefined အကွာအဝေးရန်သင့် AI အသင်္ဘောကိုနေရာချခွင့်ပြုတဲ့သေးငယ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါသင်္ဘော USS Nimitz (CVN-68) လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စွယ်စုံအမေရိကန်နျူကလီယားစွမ်းအင်သုံး-ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 11 ကုမ္ပဏီကြီးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတရေတပ်သည်နှင့်လက်ရှိကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးစစ်သင်္ဘောတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်္ဘောကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းပစိဖိတ်ရေယာဉ်စုမှာထားတော်မူသောသူရေတပ်ဗိုလ်ချုပ် Chester Nimitz ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်, Nimitz အမည်ရှိ၏။ အဆိုပါသင်္ဘော၏ဆောင်ပုဒ် "လုပ်လုပ်ခြင်း, တစ်ထုံးတမျးစဉျလာ" ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းအမြစ် ဝီကီပီးဒီးယား
အဆိုပါသင်္ဘော USS Dwight D. ချို (CVN-69), Ike ချစ်စနိုးခြင်း, Nimitz အတန်းအစား၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအမေရိကန်နျူကလီယားစွမ်းအင်သုံး-တစ်ဦးစွယ်စုံလေယာဉ်တင်သင်္ဘောခဲ့သည်။ ဒါဟာဒုတိယလေယာဉ်တင်သင်္ဘော Nimitz subclass ဖြစ်တယ်, 11 ကုမ္ပဏီကြီးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောရေတပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူကသင်္ဘော USS Franklin D. Roosevelt ရုစဗဲ့, ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကနေဟောင်းတစ်ဦးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုအစားထိုးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ မူလကယင်းသင်္ဘောကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ချို 34th သမ္မတ Dwight ဒါဝိဒ်သည်ချို၏ဂုဏ်အသရေရှိအမည်ရှိ၏။ သို့သော်သူ၏နာမကိုအပြည့်အဝနာမကို Dwight D. ချိုမေလ 25, 1970 တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်္ဘော၏ဆောင်ပုဒ် "ငါသည် Ike လို၏။ " ဝန်ဆောင်မှုသို့ကွှလာကတည်းက Ike 13 ကွဲပြားခြားနားသောပညတ်တို့ကိုစောင့်အရာရှိရှိခဲ့ပါတယ်။ source ဝီကီပီးဒီးယား